2013-12-29 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
Angry Birds Star Wars 1.5.0 (2013) for PC Full With Patch and Activator
IN PC games - ON Saturday, January 04, 2014 1 comment
Angry Birds Star Wars 1.5.0 (2013) | 97.4 MB
Angry Bird ချစ်သူများအတွက် Angry Birds Star Wars 1.5.0 PC Game တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Auslogics Disk Defrag Professional 4.3.5.0 Full With Keygen/Serial
IN Optimizer - ON Friday, January 03, 2014 No comments
Auslogics Disk Defrag Professional 4.3.5.0 | 6.4 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိတို့ဝင်းဒိုးရဲ့ ဟတ်ဒစ်ကို Free space လို့ခေါ်ရမယ့် မန်မိုရီအပိုတွေ ထွက်လာအောင်၊ Error တွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ Bad Sector တွေ ကင်းရှင်းအောင်၊ ဝင်းဒိုးကို အသုံးပြုတဲ့အခါ သွက်လက်မြန်ဆန်လာအောင် ဟတ်ဒစ်ကို ဖိုင်စီပေးမယ့် ဆော့ဝဲလ်လေးပါ..။ ပုံမှန် ဝင်းဒိုးထဲကနေ တဆင့်စီ သွားပြီး အဆင့်ဆင့် ဖိုင်စီအောင် မလုပ်ပေးတတ်တဲ့ သူများအတွက် ဒီကောင်လေးနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့
အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6.4 MB ရှိပါတယ်..။
WinASO Registry Optimizer 4.8.5.0 Full With Keygen/Patch
WinASO Registry Optimizer 4.8.5.0 | 7.8 MB
Coolutils Total PDF Converter 2.1.256 full with serial
IN Converter - ON Friday, January 03, 2014 No comments
ဖို့ Convert လုပ်နိုင်တဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးအပိုင်း
OS : Windows XP/2003/7/8 Language : Multilanguage
Wedding Album Maker Gold 3.53 Full With Serial
IN Photo and Media Editor Tools - ON Friday, January 03, 2014 No comments
Wedding Album Maker ကတော့ဓါတ်ပုံတွေကိုသီချင်းနောက်ခံလေးနဲ့ထားပြီးလှပပြီးသံစဉ်ချိုတဲ့
Home Movie လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်.. Windows Movie Maker တို့လို Power Director တို့လို့ လေးပြီးသိပ်ကျွမ်းကျင်နေဖို့မလိုပါဘူး.. ဆော့ဝဲနာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်မင်္ဂလာဆောင်ဓတ်
ပုံတွေကို အမှတ်တရ Album လေး လုပ်လို့ရအောင် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဆိုပေမယ့် အသေးစား အမှတ်တရဓါတ်ပုံတွေကိုအမှတ်တရတေးသီချင်းလေးနဲ့အမှတ်တရ Video လေးလုပ်ပြီးDVD, VCD
တွေမှာနောက်ခံ တေးသီချင်းတွေနဲ့အတူဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.. လိုအပ်ရင်တော့အောက်မှာယူသွား
OS : Windows 8/7/XP/Vista/NT/2000
Mac Blu-ray Player for Windows 2.9.7.1463 full with Crack
IN Players - ON Friday, January 03, 2014 No comments
Mac Blu-ray Player for Windows 2.9.7.1463 Multilingual | 41 MB
Any DVD Converter Professional 4.6.2 full with keymaker
Any Video Converter Professional 4.6.2 အသစ်ထွက်လာတာလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် သူ့မှာသုံးလို့ ရတာတွေကတော့ အများကြီးပါ ဖေါ်မတ်အားလုံးနီးပါးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေး
ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Format တွေကတော့ သူ့ဆိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်
Aiseesoft Blu-ray Player 6.2.32 full with crack
Aiseesoft Blu-ray Player 6.2.32 | 37.0 MB
ရုပ်ထွက် အရည်အသွေး နဲ့ ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ Media Player တခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နှစ်ခြိုက်ရတဲ့ Player တခုဖြစ်သလို တခါမှ မတင်ပေးဖူးတာကြောင့်လည်း
တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အောက်မှာဒေါင်းယူသွားလိုက်ကြပါဗျာ။
Active KillDisk Professional Suite 8.0 full with key
IN Recovery Software - ON Friday, January 03, 2014 No comments
• Parallel erasing/wiping of several disks at the same time
• Universal Boot Disk Creator for CD/DVD/USB for Windows & DOS
• Latest Active@ Boot Disk6Lite
• Settings stored in portable INI text file instead of local Registry
• Supports solid state drives (SSD)
• Supports fixed disks, USB, floppies, zip drives, FlashMedia drives
• Supports large-sized drives (more than 2TB)
• Operates from bootable: USB disk or bootable CD/DVD/BD
• Wipes out NTFS/FAT/exFAT/HFS+ volumes from areas containing deleted and unused data
• Wipes out free clusters (unused by file data sectors)
• Wipes out file slack space (unused bytes in the last cluster occupied by file)
• Wipes out deleted MFT and other system records
Supports 17 security standards:
• Erases with user defined method, using user's pattern and specified number of passes
• US Department of Defense 5220.22 M
• US Department of Defense 5220.22 M (ECE)
• US Air Force 5020
• Navso P-5329-26 (MFM)
• Canadian OPS-II
• HMG IS5 Baseline
• HMG IS5 Enhanced
• German VISTR
• Gutmann's method
FarStone DriveClone Server 10.02 Build 20131217 full with Keygen
Womble EasySub 2.0.0.109 Full With Keygen
IN Photo and Media Editor Tools - ON Thursday, January 02, 2014 No comments
Video, MP4, တွေကို Subtitle ထည့်သွင်းချင်သူများ အတွက် အလွယ်ဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစာ
ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိနိုင်သလို လုပ်ရကိုင်ရလွယ်ကူတာကြောင့် အခြား Adobe After effect တို့
ထက်အဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ဝါသနာရှင် တွေအတွက်တော့ တကယ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ကောင်
(BUG) change font style for two or more selected items.
(NEW) text positioning (margins) on the video image.
(NEW) text alignment for multi-line text items.
(BUG) loss of AV-sync for 44.1 kHz audio input.
(BUG) loading error for importing ".srt" files.
(BUG) automatic split of long text items for ".srt" files.
(BUG) incorrect frame rate for certain AVI input files.
Connectify Hotspot PRO and Dispatch PRO 7.1.0.29279 Full With Activator
IN Internet Tools - ON Thursday, January 02, 2014 No comments
မှာပါ...မိမိတို့pc ကနေ wifi ပြန်လွင့် ထုတ်ပြီးခွဲဝေ အသုံးပြုချင် သူများအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။
ဒီကောင်လေးက Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (64 &amp; 32 bit) စတဲ့ အထိအသုံးပြုလို့ရနိုင်တာကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း (8 MB )ပဲရှိပါတယ်...အသုံးလိုမယ်ဆိုရင်ဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါ။
အမြဲတမ်းအသုံးပြုလို့ ရအောင် Activator လေးပါထည့် သွင်းပေးထားပါတယ်။
OS : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (64 & 32 bit) Language : English
Photo DVD Maker Pro 8.53 Full With Keygen
နာမည်ကိုမြင်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်.. ဓါတ်ပုံတွေကိုနှစ်သက်ရာ mp3 သီချင်း
တွေနဲ့ DVD Format အဖြစ် လှလှပပဖန်တီးလိုသူတွေသုံးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်..
Tint Guide Software Pack DC 31.12.2013 Full With Patch
IN Photo and Media Editor Tools - ON Wednesday, January 01, 2014 No comments
Tint Guide Software Pack DC 31.12.2013 | 36 MB
Angry Birds Star Wars 1.5.0 (2013) for PC Full Wit...
Auslogics Disk Defrag Professional 4.3.5.0 Full Wi...
WinASO Registry Optimizer 4.8.5.0 Full With Keygen...
Coolutils Total PDF Converter 2.1.256 full with se...
Mac Blu-ray Player for Windows 2.9.7.1463 full wit...
Any DVD Converter Professional 4.6.2 full with key...
Active KillDisk Professional Suite 8.0 full with k...
FarStone DriveClone Server 10.02 Build 20131217 fu...
Connectify Hotspot PRO and Dispatch PRO 7.1.0.2927...
Tint Guide Software Pack DC 31.12.2013 Full With P...
SlySoft AnyDVD & AnyDVD HD 7.3.9.0 Full With Patch...
Video Booth Pro 2.5.6.6 Full With Crack
EASEUS Partition Master 9.3 Unlimited Edition Full...
PHP Report Maker 7.0.0 Full With Serial
ImTOO Audio Converter Pro 6.5.0.20131230 Full With...
PDF-XChange Editor 3.0.307.0 Multilingual Full Wit...
Active Disk Image Professional 5.6.2 Full With Ser...
AiseeSoft Total Video Converter 7.1.20 Full With K...
DivX Plus 10.1 Build 1.10.1.362 Full With Keygen
cFosSpeed 9.05 Build 2090 Beta with Trial reset
SoftMaker Office Professional 2012.679 Full With K...
CyberLink ColorDirector Ultra 2.0.2315 Multilingua...
Corel MotionStudio 3D 1.0.0.252 Full With Keymaker...
WinUtilities Professional Edition v11.1 full with ...
Opus Creator 9.02 Full With Crack
Screeny Pro 3.5.0 Full With Serial
Fun Face Master 1.7 Full With Serial
High-Logic FontCreator Professional Edition 7.5.0....